PUBG Mobile UC 1800 Redeem Code ~ ICT.com.mm
HomePUBG Mobile UC 1800 Redeem Code
PUBG Mobile UC 1800 Redeem Code
PUBG Mobile ဂိမ်းမှာ ငွေကြေးအဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့ UC (Unknown Cash) တန်ဖိုး 1800 ရှိတဲ့ Redeem Code ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကာဗာ Skin တွေ၊ အဝတ်အစားတွေ၊ လေထီးတွေ၊ Crates တွေ စသဖြင့် ဂိမ်းအတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ PUBG Mobile Unknown Cash or PUBG... [Learn more]
Brand: PUBGFilter by: Gaming Gift Cards, Wall
PUBG Mobile ဂိမ်းမှာ ငွေကြေးအဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့ UC (Unknown Cash) တန်ဖိုး 1800 ရှိတဲ့ Redeem Code ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကာဗာ Skin တွေ၊ အဝတ်အစားတွေ၊ လေထီးတွေ၊ Crates တွေ စသဖြင့် ဂိမ်းအတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
PUBG Mobile Unknown Cash or PUBG UC is the in-game currencies of PUBG Mobile, it is used to purchase in-game items such as weapon skins, clothes, parachutes, crates and many more.
You may receive within 15-30 minutes during business hours or up to 12 hours upon successful payment confirmation.
ရုံးချိန်အတွင်း မှာယူပါက ၁၅-၃၀ မိနစ်ခန့်အတွင်း လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်ပြီး၊ ရုံးချိန် ပြင်ပတွင် မှာယူခဲ့ပါက ၁၂ နာရီအထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ Payment confirmation အပေါ်လည်း မူတည်ပါသည်။